Umtshakazi weNkosazana, nguWilliam Goldman | Uncwadi lwangoku
UAlberto Legs | | I fantasy, iintlobo, Iincwadi, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha
Kuzo zonke iincwadi ezipapashwe kwinkulungwane yamashumi amabini, zikhona ezinokuhlala ngonaphakade kwaye zichaphazela bonke abantu abazifundayo. Kwaye omnye wabo ngokungathandabuzekiyo Umtshakazi kaWilliam Goldman, eyapapashwa ngo-1973 ephinda ihlengahlengise umsebenzi ngu S. Morgenstern ngokusekwe kumacandelo ayo utata kaGoldman amkhethele wona ebuntwaneni bakhe.
1 Isishwankathelo somtshakazi
2 Abalinganiswa boMtshakazi woMtshato
3 Umtshakazi weNkosazana: Inoveli yefantasy iphinde yavela
Inkosazana ebandakanyekileyo yahlulwe yangamacandelo amabini. Eyokuqala, njengesandulela, ucinga intetho kaWilliam Goldman ngokwakhe, othi ngentsomi, abalise ngobomi bakhe, ngakumbi ubuntwana apho utata wakhe, umfuduki uFlorinian, emfundela ubusuku ngabunye Umtshakazi weNkosazana: Ibali lakudala lothando lokwenyani kunye nokuzonwabisa okukhulu ngu S. Morgenstern. Ikwayilento yamncedayo ukuba angenise uncwadi kwaye ashiye ixesha lokufikisa "lokulahla ukucinga," ngokutsho kwabazali nootitshala bakhe. Kwiminyaka kamva, xa uGoldman ekugqibeleni wazibonakalisa njengombhali wenoveli, wagqiba kwelokuba athumele le ncwadi kunyana wakhe, eqonda kungekudala emva kokuba emshiyile emva kokufunda isahluko sokuqala. Yile ndlela umbhali afumanisa ukuba ibali awalixelelwa ngutata wakhe lalisekwe kwezona ndawo zonwabisayo zencwadi kaMorgenstern. Isitshixo esingakhokelela kuWilliam Goldman ukuba abhale i-Princess Bride, ibali lesibini eligutyungelwe sisihloko.
Umtshakazi, yena, unjalo ibali elidibanisa iintlobo ezahlukeneyo ezifana nokuthandana, i-adventure, imfesane kunye nokuhlekisa. Ukusekwa kwilizwe eliyintsomi likaFlorin (utata kaGoldman wayenguFlorinian, ke oko kukhokelela kumfundi kwibali eliyinyani njengoko kuyintsomi ngokusekwe kwigama lemali yakudala eyayisetyenziswa eFlorence ngamaxesha aphakathi), uMtshakazi weNkosazana uxelela Ibali lothando phakathi kweNkosazana Buttercup kunye nentanda yakhe iWestley, othi emva kokusweleka akhokelele iButtercup ukuba ibandakanyeke kuHumperdinck, inkosana engendawo, ukunqanda imfazwe. Nangona kunjalo, kungekudala ngaphambi komtshato, iqela labaphangi lixhwithe inkosazana. Amalungu Íñigo Montoya, oyena mntu uphethe ikrele kwihlabathi; IVizzini, oyena mntu ukrelekrele kakhulu; kunye noFezzik, onamandla, ongayi kubakho ubukho bendoda engaqondakaliyo emnyama ebasukelayo xa bebaleka.
Abalinganiswa boMtshakazi woMtshato
I-Princess Bride igcwele i-villains, iinkosana, amakhosazana kunye nabanye abalinganiswa abanokucinga, aba balandelayo ngabalinganiswa abaphambili ebalini:
Ibhotela: Ungumlinganiswa ophambili kwaye uyathandana noWestley. Intombazana enobisi eneenkani enezimvo ezisisigxina yajika yaba yeyona ntombazana intle kubukumkani baseFlorin, kwaye, isitshixo sokuphepha imfazwe phakathi kwamacala omabini.
IWestley: Yinkwenkwana ezinzileyo ethandana noGcuwa, intombi yomniniyo kwaye nendlu yayo itshisiwe yamshiya ehluphekeni ngokupheleleyo. Ukusombulula imeko kwaye akwazi ukutshata noGcuwa, uya kuhambo ngesikhephe ethembisa ukuba uza kubuyela kuye. Nangona kunjalo, ngexesha lohambo, ubulawa nguPirate Roberts Deel okhohlakeleyo.
INkosana humperdinck: Ububi kunye nobubi, iNkosana uHumperdinck ayazi nokuba ngubani uButtercup, kunye no-Count Rugen ophetheyo ngokuzisa oyena mfazi mhle ebukumkanini. Ungumzingeli onomdla kwaye uceba ukuqweqwedisa uGcuwa ngaphambi kokutshata ukuze axhokonxe imfazwe nesizwe saseGuilder.
Inigo MontoyaImvelaphi yaseSpain, lo mlinganiswa uthathwa njengoyena mntu uphethe ezona zikrele ehlabathini, engomnye wamalungu amathathu athatha iButtercup. Njengawo onke amanye ama-mercenaries, urhuqa ixesha elidlulileyo apho angabaleki khona kwaye apho umfundi afikelela khona ngamanqamlezo ebalini. Lelona binzana eliyintsomi «Ndingu-Íñigo Montoya, ubulele utata, ulungiselele ukufa», kakhulu kwimilebe yabantu abancinci kangangokuba, kwii-80s, babedlala abantu abangamakrele belingisa lomlinganiswa.
IVizzini: Imvelaphi yeSicilian, yeyona ndoda ikrelekrele kwaye isandla sasekunene seNkosana uHumperdinck ngokubhekisele ekuthinjweni kweGcuwa. Ikwaphethe iingxaki ezahlukeneyo zangaphambili.
FezikUkusuka eGreenladia, uFezzik yindoda enkulu eselula ethathwa njengoyena mntu unamandla emhlabeni. Uhlala ecula iingoma eziqhuba iVizzini kwaye akayithandi imilo emdaka.
Umtshakazi weNkosazana: Inoveli yefantasy iphinde yavela
Iinoveli ze-adventure kunye nezobumnandi zezo zazidla ixesha elininzi ebuntwaneni bombhali weThe Princess Bride, UWilliam Goldman. Umbhali oneli bali ufuna ukuphinda aluvuselele kwakhona uhlobo ngokuvumela ibali labantwana ukuba litolikwe ngabaphulaphuli abadala. Ngokusekwe kuburharha, iparody kunye nabalinganiswa abangakhange bahlangabezane nemigaqo elindelweyo kwibali eliqhelekileyo lothando, Umtshakazi weNkosazana Yapapashwa ngo-1973 e-United States yi-Harcourt Brace indlu yokupapasha.. Nangona kunjalo, kamva uGoldman wanyanzelisa ukongeza imeko entsha eyalahlwa ngumhleli wakhe kwasekuqaleni ukunqanda iingxaki zelungelo lokushicilela noMorgenstern. Khumbula ukuba iPrincess Bride yingxelo yamabali kaMorgenstern, kodwa akukho xesha apho izama ukuguqula izinto ezikhoyo.
Emva kokuthengisa kakhulu, incwadi yaphakama yabulela nangaphezulu ukulungelelaniswa kwefilimu okhutshwe ngo-1987. Ekhokelwa nguRob Reiner kunye noCary Elwess kunye noRobin Wright, le filimu yabhalwa nguGoldman ngokwakhe kwaye waba yimpumelelo yebhokisi yeofisi.
Iminyaka engamashumi amathathu emva kwenkulumbuso yefilimu (kunye namashumi amane encwadi), iNkosazana uMtshakazi iyaqhubeka nokuba yinto yakudala kuncwadi kwindalo iphela. Iiseti zeentlobo awathi uWilliam Goldman waphinda waziphinda-phinda iinoveli zobomi, wagxeka ukugqitha kobukhosi baseYurophu, wachaza izibonelelo zokufa, kwaye ekugqibeleni watsala umdla wamakhulu abafundi.
Aba bantu namhlanje baqhubeka nokuthathela ingqalelo uMtshakazi weNkosazana njengo enye yeencwadi ezilungileyo kakhulu kunye nobungqina bokuba incwadi elungileyo inokufumana njani engcono.
Ngaba ufunde Inkosazana ebandakanyekileyo nguWilliam Goldman?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inkosazana uMtshakazi, nguWilliam Goldman